Mepụta Vorus CrusaderF8 v1.00 FSX & P3D - Rikoooo
Laborie Roland, Laurent correia, Jean Pierre Langer, Jean Pierre Bourgeois, FSX melite site Danny Garnier
Ezigbo nkọwa zuru oke add-on nke Roland Laboie (onye French) mebere. Na mbu ọ diri FS2004 mana ekele enyi anyị Danny Garnier ọ dabara ugbu a (ọdụ ụgbọ mmiri) na FSX or Prepar3D. Na-agụnye akpịrị kokpiiti (VC), ihe ndozi iri na abụọ na nsụgharị dị iche iche, ụda ọdịnala, ihe ngosi (ọkụ, bọmbụ, agba, wdg), mmetụta (post-combustion, wdg) na ọtụtụ ihe ndị ọzọ mara mma.
The F-8 Crusader (na mbụ F8U) bụ a supersonic fighter ugbo elu wuru Vought maka United States, na onboard ugbo elu ụgbọelu. Ọ e ji ntụ uzo mmiri na a dịghị òkè ma variable omume airfoil. N'agbanyeghị ihe ọzọ ibu arọ ruru ya naval ngwá, ọ na-egosiputa otu arụmọrụ dị ka ya n'ala ndị dabeere na counterpart, ndị North American F-100 Super Sabre.
N'okpuru, akwụkwọ zuru ezu n'asụsụ French yana eserese (etinyekwara ndị nke a add-on)
Onye edemede: Laborie Roland, Laurent correia, Jean Pierre Langer, Jean Pierre Bourgeois, FSX melite site Danny Garnier